Ukwenza ingadi icebo e impahla: emaphuzu lamcoka
Omunye ethandwa kakhulu phakathi senimbuso munye yethu izindlu nezindawo ukuthengiselana - ukubhalisa isayithi engadini. Umthetho muva esamukelwa ngo "dacha ushwele" uye wakwenza ezingaphezu futhi omunye zokwelapha ezitholakalayo. Yini imibhalo edingekayo kuthengiselana yalolu hlobo Iziphi izinkinga ezingase ziphakame design? Funda ngakho esihlokweni.
Yini okungukuthi a "dacha ushwele"?
Ngakho evamile ngokuthi umthetho Russian Federation ohlinzekela inqubo lula sokubhalisa ukwakhiwa phezu dacha. It lwemukelwa ukuze "kube lula ukuphila" cottagers uphinde ubavumele ukuba babe abanikazi egcwele umhlaba iziza ukuthi kukhona ekusebenziseni kwabo unomphela. Ngaphambili, lolu hlobo ubunikazi ayikuvumeli ukuba adayise leli zwe, ngakho kakhulu nomkhawulo amalungelo abo.
Ukwenza icebo ingadi: ukuqala kuphi?
Ngakho, ake sithi unquma ukudayisa umhlaba wakho. Njenganoma iyiphi enye mcimbi yokufuna amalungelo impahla, ukubhalisa isayithi engadini kumele kuqale ngokubuthana wonke amaphepha adingekayo. Phakathi kwabo:
Isicelo sokubhalisa isimo okuzokwenziwa elabhalwa ngokwakho ngenkathi ngokubeka imibhalo asele;
idokhumenti kuqinisekisa ilungelo lakho bachithe umhlaba;
cadastral ipasipoti kwesigaba;
irisidi - ubufakazi bokuthi usukhokhe imali isimo.
Uma umklamo uzungu ensimini kusihlwa ngokuphola impahla, ngeke ukukhiqiza ngokwabo, futhi ukuphathisa ngalo komunye ummeleli yakho, qiniseka ukuthi anakekele lesi, ukuthi nesibhamu ukugunyazwa eqinisekisiwe evela kuwe. Kungenjalo, ilungelo simele izintshisekelo zakho ngeke.
Uma yonke imibhalo on uhlangothi, ungathola phansi ibhizinisi - ukuze zisebenze Federal Ukubhalisa Service endaweni bezwe itholakala. Inqubo yokubhalisa komhlaba kuzoncika esimweni esithile futhi khona izimo ezinzima (ayitholakali imibhalo ethile kwesigaba esele izinhlangano ezweni; izwe lase aluthola isikhathi eside nayo yonke imibhalo elahleka, futhi kukhona konke ngaphandle ibalazwe cadastral, njll ...).
Wamaphepha for engadini: ezinye umehluko wemisindo nemiqondo yamagama
Kunezimo lapho imibhalo efakazela ukuba khona ngabanikazi bomhlaba, abanalo umnikazi. Izizathu zalokhu kungenzeka ezimbili:
Okokuqala - umnikazi wayengazi "dacha ushwele" futhi wabamba lelo thuba (noma ngamabomu wenza lokhu ukuze sigweme ukukhokha intela);
yesibili - "dacha ushwele" isayithi akunakwenzeka ngenxa kwanoma yiziphi izimo.
Ezimweni ezinjalo, ukuqaliswa ukudayiswa imithetho ezivamile akunakwenzeka. Nokho ukudlulisela ubunikazi komunye umuntu, ungakwazi - uma umdayisi uyovela partnership, futhi umthengi ngesikhathi esifanayo ukuza. Amadokhumende dacha umphakathi kuzodingeka ukuthi wenze irekhodi kulelo zwe manje ephethwe ngomunye umnikazi, nimnike idokhumenti kuqinisekisa lokhu (isibonelo, incwadi wensimu). Njengoba ngaphambi, umnikazi omusha we sayithi bodokotela isizathu ukulahla kwabo, okungukuthi. E. Ukuthengiswa. Uma umthengi evuma ukuba pre-marketing imvume icebo engadini ukuthi zilawule, kufanele wazi ukuthi intengo yale impahla lingaphansi kakhulu kunenani abekiwe, ngoba inqubo "ukubuyisela oda" ku imibhalo ngezinye izikhathi kukhona sasivumela ezibizayo (by ayizinkulungwane 30). Kungcono ukusebenzisa, kulesi simo nge ummeleli. Kungaba ube umngane agent ingcebo noma ummeli ongumnikazi isipiliyoni ezidingekayo kulo mkhakha.
Thatha ngemva bokuhlukaniswa izincwadi zokushayela. Kuhlolwa amaphoyisa omgwaqo